Bitcoin Cash inona izany ary ahoana no hividianana? Tombontsoa sy lafy ratsy amin'ny Bitcoin | Vaovao momba ny gadget
Bitcoin Cash inona izany ary ahoana no hividianana?
Guillermo Mancho | | Cryptocurrencies
Bitcoin Cash dia cryptocurrency teraka tamin'ny lasa 1 Aogositra 2017 manomboka amin'ny Bitcoin ka andramo ny famahana ny olan'ny scalability an'ny Bitcoin tany am-boalohany. Izy io dia iray amin'ireo vola malaza indrindra miaraka amin'ny sandan'ny tsena avo dia avo izay mametraka azy eo amin'ny laharana faha-3 amin'ny totalin'ny laharana crypto, ao ambadiky ny Bitcoin sy Ethereum tany am-boalohany ihany. Na eo aza ny fiainany fohy, Bitcoin Cash dia manana vondrom-piarahamonina matanjaka ao aoriany ary misy ny olona sasany izay milaza fa amin'ny ho avy dia izy no Bitcoin manan-danja indrindra, na dia ny Bitcoin tany am-boalohany aza dia lasa amin'ny toerana faharoa noho ny olana mahazo azy. Noho izany, pMba hahatakarana ny atao hoe Bitcoin Cash dia tsy maintsy takatsika aloha inona ary avy aiza ny bitcoin.
1 Ny niandohan'ny Bitcoin
2 Tantaran'ny vola bitcoin
3 Ahoana ny fividianana vola bitcoin
4 Tombony amin'ny vola bitcoin
5 Olana amin'ny vola Bitcoin
7 Bitcoin cash quote
Ny niandohan'ny Bitcoin
Bitcoin dia noforonina tamin'ny fomba tsy fantatra anarana olona iray na vondron'olona ambanin'ny solonanarana "Satoshi Nakamoto". TheNy tanjon'ity olona na vondron'olona ity dia ny hamorona fomba itsinjaram-pahefana amin'ny fandefasana sy fandraisana vola amin'ny fampiasana teknolojia fantatra amin'ny hoe blockchain na blockchain. Ny mpamorona ny Bitcoin "Satoshi Nakamoto" dia nampihatra andian-dalàna tao Bitcoin, ny iray amin'izy ireo dia tsy nisy mihoatra ny 21 tapitrisa Ny singa raha ny fepetra iray hafa dia ny famoronana sy famoronana ireo Bitcoin ireo no hany fomba fampiasana ny azy ireo free software hanampy amin'ny famahana ny fifanakalozana izay novokarina soa aman-tsara. Rehefa mandefa Bitcoin any amin'ny iray hafa ny mpampiasa dia mila mandoa kaomisiona (sarany) handraisana anjara amin'ny tambajotra izy; ny tamba-jotra dia ireo solosaina mampandeha ity rindrambaiko manokana ity mba hamokarana tsara ny fifanakalozana. Ireo solosaina sy / na masinina ireo dia antsoina "Mpitrandraka" ary na iza na iza eto amin'izao tontolo izao misy fifandraisana amin'ny solosaina sy Internet mety ho mpitrandraka.
Amin'izany fomba izany tsy nilaina ny nampiasa vatana afovoany, governemanta na banky azonao itokisana satria ianao mihitsy no tompon'andraikitra sy tompona Bitcoins anao. Ity teknolojia ity noforonina tamin'ny taona 2008 nisy fetra voafaritra io; Noho ireo fetra ireo dia nisy vondrona mpandahatra fandaharana marobe nipoitra tamin'ny fikasana hanatsara sy hampiakarana ireo fetran'ny Bitcoin ireo.
Vondron'olona maro hafa koa no noforonina nanolo-tena hametraka sy hanangana toeram-pambolena Bitcoin lehibe. Izany dia hanampy ireo vaovao hahatakatra etsy ambany hoe inona izany ary ny fomba namoronana Bitcoin Cash. Ary avy eo dia ho hitantsika ihany koa ireo dingana tokony harahina afaka mividy Bitcoin Cash soa aman-tsara.
Nilaza izahay fa Bitcoin dia noforonina an-tsokosoko ary ny tetik'asa sy ny rindrambaiko dia ampahibemaso; Midika izany fa afaka manova azy io ny tsirairay, manatsara azy ary manampy endri-javatra vaovao. Saingy mba hampiharana ireo fanatsarana ireo dia tsy maintsy eken'ny ankamaroan'ny "mpitrandraka" izy ireo izay tsy maintsy manavao sy misintona an'ity fanatsarana ity, izay antsoina amin'ny fiarahamonina "marimaritra iraisana" Ary iray amin'ireo toetra mampiavaka ny teknolojia blockchain.
Rehefa misy mpampiasa manao raharaham-barotra izany dia voatahiry ao a andian-tsoratraNy sakana tsirairay dia manana haben'ny 1MB ary afaka mitahiry raharaham-barotra maromaro. Ireo sakana ireo dia vokarina ho azy isaky ny X, fa tsy fotoana voafaritra.
Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny Bitcoin dia mipoitra rehefa lasa malaza sy mitombo be ny isan'ny fifanakalozana. Avy eo dia misy ny fifanolanana sasany ao amin'ny vondrom-piarahamonina Bitcoin momba ny fomba hiatrehana an'io olana io. Ny vokatr'io olana io dia misy fiatraikany amin'ny fifanakalozana, satria maro loatra, miditra amin'ny toera-piandrasana izy ireo izay miangona mifototra amin'ny kaomisiona izay nalain'ny mpampiasa rehefa nanao izany. Rehefa mitranga izany dia miakatra ny vaomiera (arakaraka ny fiakaran'ny vidin'ny tambajotra) ary ny fotoana ilana azy hanamafisana ny fifanakalozana dia mitombo be ihany koa raha ny fifampiraharahana misy kaomisiona avo kokoa no aleon'ny sasany.
Eto no mipoitra ny lehibe indrindra amin'ny olana izay mizara roa ny fiarahamonina Bitcoin ary manomboka ny ady «tombotsoa» eo amin'ireo mpitrandraka sy ireo mpamorona Bitcoin.
Azontsika tsara izany, azontsika atao ny manazava hoe inona ny a Hard Fork. Ny Hard Fork dia fizarana ny sakana lehibe izay Bitcoin. Mitranga izany rehefa tsy ekena ny tolo-kevitra fanatsarana ary mizara roa ireo mpitrandraka manohana ny tambajotra Bitcoin. Aorian'izay ianao vao afaka mamorona vola nomerika faharoa amin'ny rojo tany am-boalohany izay Bitcoin, ary toy izao no nisehoan'ny "Bitcoin Cash". Mba hahalalana izany amin'ny fomba hita maso kokoa dia tokony hahita ity sary manaraka ity ianao:
Kitro Bitcoin Cash
Mety ho izany tsara na ratsy, arakaraka ny fijerinao azy. Rehefa a Hard Fork raha ny marina izay mitranga tsy maintsy atao dia ny klona. Noho izany, ireo mpitrandraka izay manohana ny rojo vaovao dia manangona ny angon-drakitra ny rojo tany am-boalohany amin'ilay rojom-baovao nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ampiharina, izay ahazoan'ireo mpampiasa izay manana Bitcoin ao anaty poketra (poketra) azy ireo mandeha ho azy ary manafaka Bitcoin Cash, izany hoe izao dia izao aorian'ny fikorontanana mafy dia hanana bitcoin ianao ary vola bitcoin.
Tantaran'ny vola bitcoin
Ny tantaran'ny Bitcoin Cash Tena fohy izy io hatramin'ny Aogositra 1 avy amin'ny 2017 azo avy amin'ny olan'ny scalability sy ny tsy fahampian'ny fahatakarana ny fiarahamonina voalaza etsy ambony, na dia mihevitra aza isika fa taona maro niadian-kevitry ny vondrom-piarahamonina Bitcoin ireo olana ireo, ny tantaran'ny Bitcoin Cash dia niverina lavitra kokoa.
Ahoana ny fividianana vola bitcoin
Mba hahazoana Bitcoin Cash dia azontsika atao amin'ny fomba maro, ny mora indrindra misoratra anarana ary manokatra kaonty amin'ny iray amin'ireo fifanakalozana lehibe. Ohatra, afaka mampiasa ireto manaraka ireto isika:
Raha vantany vao mamorona ny kaonty isika dia tsy maintsy manamarina izany amin'ny fanomezana antontan-taratasy na pasipaoro sy porofon'ny adiresy sy ny fahazoana ny banky.
Rehefa avy nanamarina ny kaontintsika isika dia tsy maintsy manaova famindrana banky manomboka amin'ny kaontinay ka hatrany amin'ny banky dia asehoy ilay mari-pamantarana tokana omenao amin'ny kaontinao.
Rehefa efa manana ny vola ao amin'ny kaontintsika isika dia tsy maintsy mitrosa manaova ny fividianana amin'ny tranokalanao ary atakalo amin'ny Bitcoin Cash ny euro anay dia hataonay ny fampiasam-bolanay.
Tombony amin'ny vola bitcoin
Ny tombony lehibe amin'ny Bitcoin Cash dia vitsy raha oharina amin'ny Bitcoin tany am-boalohany, fifanakalozana haingana kokoa miaraka amin'ny vidiny ambany kokoa ary azo refesina.
Nahavita an'ity izy ireo mampitombo ny haben'ny block tsirairay avy amin'ny 1MB ka hatramin'ny 8MB azo refesina hatramin'ny 32MB tsy misy fork fanampiny mamela eo anelanelan'ny 23 sy 92 fifanakalozana isan-tsegondra raha oharina amin'ny 3-7 tx / s (fifanakalozana isan-tsegondra) avelan'ny Bitcoin tany am-boalohany.
Olana amin'ny vola Bitcoin
Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny Bitcoin Cash dia 8MB haben'ny sakana ary satria? Eny, satria izany dia midika famatsiam-bola lehibe amin'ny milina fitahirizana ho an'ireo mpitrandraka izay mandray anjara amin'ny tambajotra, izay afaka mamerina azy ireo, izay afaka misafidy ny hanohana ny tambajotra 1MB tany am-boalohany izay tsy ilana fampiasam-bola vaovao.
Ny olana hafa dia ireo mpampiasa mampiasa Bitcoin tsy matoky ny ambaratonga ny fanekena izay mety manana Bitcoin Cash noho ny vidiny lafo tokony hotazominy, satria io dia mety hahatonga ny tambajotra Bitcoin Cash hijanona eo am-pelatanan'ny olom-bitsy vitsivitsy manana kapitaly ampy hiatrika azy ary amin'izany fomba izany dia fehezin'ny vondron'olona vitsy izay manana fifehezana ny tambajotra, fa ny tambajotra Bitcoin tany am-boalohany kosa dia nozaraina bebe kokoa ary noho izany dia sarotra kokoa ny mifehy sy mifantoka.
Aroso ny seho, Bitcoin Cash dia nahavita nametraka ny tenany nandritra ny fotoana kelikely toerana faharoa amin'ny kapitalin'ny tsena ao ambadik'i Bitcoin. Amin'izao fotoana izao, toy ny datin'ity lahatsoratra ity dia eo amin'ny laharana fahatelo izy ary toy izao ny toe-javatra:
Mitohy ny ady ary haharitra amina fihodinana maro nanomboka teo ny vondrom-piarahamonina Bitcoin dia lehibe tokoa ary rehefa mahafantatra ny blockchain ny mpampiasa vaovao ary lasa liana amin'ny vola crypto, ny zavatra voalohany ataon'izy ireo dia ny mampiasa vola amin'ny Bitcoin fa tsy Bitcoin Cash, satria izy no voalohany sy mpanjakavavin'ny rehetra. Ao anatin'ny kapiteny Bitcoin tany am-boalohany, Bitcoin Cash mety ho mpifaninana mendrika Noho ireo mpamatsy vola lehibe ao aoriany sy ireo toetra mampiavaka azy amin'ny fifanakalozana haingana sy mora kokoa, saingy ity dia olana iray izay efa voavaha ny vola crypto hafa manan-danja efa ela, toy ny Ethereum, izay mitana ny laharana faharoa amin'ny kapitalin'ny tsena, hitanao io. amin'ny sary teo aloha. Tokony hanontany tena isika hoe nahoana aho na mpampiasa hafa no mampiasa vola na mividy Bitcoin Cash nefa haingana sy mora kokoa ny Ethereum? Noho io antony io dia maro ny olona manapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ny Bitcoin satria mpanjakavavy io ho tahiry mitahiry vola ary hampiasa vola nomerika hafa toa an'i Ethereum hanatanterahana fifanakalozana sy fandefasana.
Ohatra amin'ny tabilao Bitcoin Cash ohatra
Tamin'ny nanombohany, Bitcoin Cash dia nanomboka varotra mihoatra ny $ 500, avy eo nanetsika teo anelanelan'ny $ 200 farafahakeliny $ 2.500, hatramin'ny nananganana an'ity lahatsoratra ity, Bitcoin Cash dia mivarotra amin'ny $ 1.248. Raha te-hahita ny vidiny amin'ny tena izy ianao dia mila ampidiro ity rohy ity.
Amin'ny tsena mikorontana, tanora sy tsy ampoizina ary miova toy izany dia tsy fantatsika tsara hoe ho aiza ny tsena, fa ho ahy dia mieritreritra aho fa mety hisy ny zava-drehetra, ka ny zavatra tsara indrindra izay heveriko fa amin'ny sehatra manokana dia ny filokana na ny mahita azy na ny zava-miseho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Bitcoin Cash inona izany ary ahoana no hividianana?
Ny Cryptocurrency, toa an'i Bitcoin, dia fialofana haba ao amin'ny rahona, ary ohatra mampidi-doza indrindra amin'ny vinavina tsy mamokatra.
Google dia manavao ny mpandahateny Google Home Mini azy amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fiasan'ny touch indray